Rio de Janeiro - I LOVE RIO- ukuphila ebusuku
Isimo sezulu esifudumele futhi predilection of Rio amaqembu baye benza Rio de Janeiro yezindawo esiyingqayizivele kunazo nokukhuthazayo for ebusuku oxokozelayo.
I Love Rio udabule izifunda esishukumisayo emzini, ukukhuphuka emagqumeni ayo futhi engena nemigoqo yalo kusukela kusihlwa kuya dawn ukuletha ulwazi abafundi okuthakazelisa kakhulu kusihlwa ukuzilibazisa. Amabhara, rock amaqembu pool, nights samba, yamathanga street, amaqembu kanye nezivivinyo zomkhosi kuthiwa bathola kanye eyinkimbinkimbi kakhulu, umsindo nemishayo exotic, ukudla, iziphuzo, umculo kanye amakhasimende. I Love Rio kusiza izivakashi futhi abantu bendawo ukuba benze lo umkhosi eclectic kakhulu ebusuku, zasendle, idolobha unique ngokumangalisayo.
Bohemian kanye Chic, unique njalo
Ukuphila ebusuku Rio de Janeiro kungaba ezihlukahlukene njengoba inqwaba omakhelwane nemijikelezo zomculo populate umuzi. The nightlife of Rio uyingqayizivele ngokuphelele futhi esibandakanya, ekwamukeleni kubantu bayo, abantu bazo zonke bathanda, okuhlangenwe nakho kanye nemihlahlandlela. Ligcwele umculo onohlonze a spectrum umbala, ukukhanya, ubumsulwa kanye Ukwanelisa inkanuko.
Ukuphila ebusuku Rio esisuka kusukela amaqembu big lapho ukulalela umculo zanamuhla, ukuba izikhungo ezincane ukunikela the arcade of isigqi ezifana Samba futhi Bossa Nova, kanti inqwaba yeshashalazi ukubungaza izivakashi nezakhamuzi kanye nemidlalo, ukufundwa, ballet, futhi inhlanganisela zokushintsha noma enza art.
Izifunda odumile emhlabeni Ipanema futhi Leblon kukhona ekhaya ezihlukahlukene Chic elicwengekile imigoqo, zokudlela nemishiza - umculo bukhoma kanye pre-aqoshiwe, kanye dj kuyatholakala ezindaweni eziningi nezinhlelo zihlukahlukene isonto lonke.
Ezingomakhelwane bohemian of Lapa manje indawo ukuzwa umculo bukhoma Samba, imigoqo ezincane informal and a ephapheme kakhulu yesehlakalo ugcwale zinsiza, iziphuzo okungahleliwe, futhi abadlali emgwaqweni.
Nemibhede amasiko zomculo, favelas Rio baye baba the yaseshashalazini enkulu for Umculo Funk imikhosi nasemakhonsathini, lokwentiwako okwandayo, edonsa abathandi umculo nezivakashi ezivela emhlabeni wonke.
Ezinyangeni ezandulela imikhosi zomkhosi, Samba izipesheli babé isihloko main kuzo zonke izifunda of the city, kanye ezazifundiswe futhi ukusebenza bukhoma e imigoqo amancane, izitolo odumile futhi ezigcawini.
Isimo sezulu esifudumele ye Rio de Janeiro ikhuthaza imisebenzi ngaphandle emini kanye ebusuku, idolo ngisho nangokwengeziwe a nightlife social ngempela futhi ekhanya unyaka wonke.
Ngemva ongaqondakali by kwelanga, abaculi ngokuvamile ukuthola ngamakhono abo ocebile. Empeleni, le Rio umculo omkhulu futhi edume wazalwa futhi athuthukiswe ikakhulu izithunzi ebusuku, kuhlanganise jazz, Bossa Nova, Tropicalia, Samba futhi Funk Carioca.
Kuwo umlando emzini, impilo ebusuku savela ngokusho isiko lendawo futhi izitayela global, ukuxutshwa kanye nokuthuthukiswa indlela kuphela Carioca.
Ukufika aseNdlunkulu e 1822, ahlelekile ebusuku ukuzilibazisa of Rio de Janeiro kuhambisana ukuthambekela salon isiPutukezi kanye European. The ithoni bese Nemvelo nemigubho eyayibekwe yinkantolo futhi enqunywe amaqembu namabhola banikela. Ngo 1889, umdanso royal nendlalifa owaqhutshelwa e kwezimali Island, ukuzijabulisa ezingaphezu kuka 4,000 izivakashi nge oludakayo cocktail party, dance kanye timphahla tekubhukusha. Wayengazi ukuthi Sebawoti nezivakashi, edilini elikhulu kwaphawula ukuphela kobukhosi kanye kwangenisa esigabeni esisha ukuzilibazisa labantu.
Ekupheleni kwekhulu le-19 isiko ebusuku wathonywa "Bohemia." WaseParis labangela ukuqala komkhakha. Amakamelo eziningana badalwa ngesitayela waseParis labangela ukuqala komkhakha, ezifana Moulin Rouge in 1891. Ngo-1909, lo Teatro Municipal (Theatre Municipal) sivulwe, esinye sezakhiwo kakhulu yesiteleka edolobheni Baroque, okuyinto namuhla. Lezi izikhungo ziye zenzeka eziningana yaseshashalazini izinhlelo, esekisini, amakhonsathi nangemidanso.
Ukuze anciphise ezinye ukubusa European emzini, umthetho owaphasiswa ngo-1901, izinqumo ukuthi izindlu amasiko kanye nezindawo obukade ibekwe amagama Brazilian kunokuba baseYurophu, eminye inkanuko ukuthuthukiswa zomculo kanye lendawo ebusuku isiko, okuholela e yisakhiwo sodumo ifilosofi nightlife wamanje Rio sika.
Izikhungo Chopp (ubhiya) baqala ukuvela ngesikhathi kwekhulu, ukuqala zibe isiko ubusuku kahle kakhulu ongaphandle sezulu esishisayo. Abesifazane waqala ukuya kulezi izikhala ezintsha zomphakathi, like amapaki, amathiyetha concert amahholo, elalibe kuphela zizinda abesilisa. Nokudlala ngothando, okungase wayeke waxoxa ngaphambili zivalelwe emini ukuvakashelwa, waqala ukuthatha Nemvelo engenazinkathazo more ebusuku.
African uzalo izakhamuzi waqala iqhaza ezindaweni ethandwa, kuphumele nomthelela obalulekile ukuhileleka kwabo futhi ithonya umculo Brazilian, coinciding ne ukuvela samba kanye Zomkhosi. In the 1920, jazz, Charleston futhi Samba besina yagcwalisa amaqembu nemishayo komuzi, ehola Olavo Bilac, intatheli owaziwayo isikhathi, ukuze amemezele Rio, "City Dance."
Lapa sazibonakalisa ukuba umphakathi bohemian of umuzi 1920, bagcwala nightclub, imigoqo futhi izindawo zokugembula. It yayaziwa ngokuthi Montmartre ezishisayo reference ethonyeni lawo waseParis labangela ukuqala komkhakha futhi, like ukhokho wakhe French, esifundeni baletha ndawonye abaculi, nezihlakaniphi, basebukhosini, osopolitiki kanye nezinhlobonhlobo zabantu ezivela kuzo zonke izizinda zokuphila. Kwaba a district exubile kakhulu, ekhaya anhlobonhlobo izinhlobo zomculo, kuhlanganise wezinsimbi classical, jazz, upiyano kanye Samba. Abaculi kanye nabalobi isikhathi wakhuluma Lapas ezimbili co-ezikhona, The evulekile imvelo kwenhlakanipho, futhi kumnyama ancoberta more.
Kanye ukwakheka Cinelandia sengqondo maphakathi nekhulu, kanye nezinye kwezomhlaba kwandile zasemadolobheni, Lapa walahlwa nezihlakaniphi kanye abaculi, futhi kwaba ngokuba nabalingani bayo eyonakalisayo kakhulu kuze kabusha esifundeni futhi ukutholakala emashumini eminyaka, abuyisele Lapa ngoba charm zalo zokuqala futhi ubukhazikhazi.
Ngo-1934, lo "Casino da Urca" isibe ngobukhulu yaseshashalazini imibukiso eNingizimu Melika, ukunikela Fusion ohlehlela play, yaseshashalazini, cabaret, umculo nokudansa. Ngemva kabusha semthethweni ukugembula 1930 amakhulu ikhasino, izikhungo eyinkimbinkimbi ngisho elula kwavela ukuze ihlanganise Ukuthanda izinto futhi kwemali ngeniso labantu. Ngo-1946, lo mdlalo wavalwa kulo lonke izwe, ophela isiko casino eRio de Janeiro Brazil.
1990 Lapa wadabula uchungechunge izinguquko zasemadolobheni, ushintsha kancane umfanekiso waso transgressive futhi wasinikeza igagasi elisha effervescence kwamasiko. The esifundeni uye Ngakho-ke, umjikelezo omubi abasafufusa njengoba legumbi yamasiko emzini ebusuku.
NgoLwesihlanu nangoMgqibelo, ikakhulukazi, elula main of endleleni nemengamo odumile ka Lapa umsele, iza ephila kanye nabathengisi Cocktails, ubhiya okumnandi ukudla emgwaqweni ezifana wosa futhi amakhekhe. The mix ezihlukahlukene labantu nezivakashi emzini axutshwa emkhathini echumayo, kuyilapho amaqembu abadansi singers kwakha tindilinga encane futhi isenzo phambi izibukeli cwaka.
A anhlobonhlobo amaqembu ziklele emigwaqweni ezingomakhelwane, ukudlala umculo wendabuko, ezifana Samba, forró futhi Funk. The omakhelwane manje ohlonishwayo yemidlalo zomculo, lapho abanye lodumo kakhulu abaculi Brazilian futhi international usebenze njalo.
Ingxenye ebalulekile yomgomo wokwengamela isiko emzini ebusuku, babizwa imigoqo wendawo "botequims." The ukuqhubeka ubhiya izindlu elidala, lezi imigoqo bavame ukuba Decor elula nesizotha, enezela banomuzwa wokuthi yayo Homely, kanti amatafula nezihlalo wamisa eceleni komgwaqo ukunikeza imfudumalo bengaphandle. Bathengisa ezihlukahlukene imigoqo bendabuko ukudla, kuhlanganise inyama bean izitsha, amaswidi, cod amakhekhe, amasobho kanye nezimfanzi, kanye Indalo kwakwakhiwa more and evelele.
Mix imigoqo, zokudlela kanye Rio umculo izindawo ngokuvamile izikhungo ukwamukela izivakashi izitsha endawo kanye ukuzijabulisa bukhoma sites zanamuhla ngokuvamile sandile Southern Rio, kanye yenkonzo main of Copacabana, Ipanema, Leblon kanye west indawo egudle Barra da Tijuca. Ngaphezu kwalokho, eziningi emahhotela kanokusho ukuziqhenya endaweni Boutique imigoqo ezibhekene zanamuhla yomphakathi namazwe omhlaba umculo iminikelo, ngokuvamile dj bukhoma.
Esinye isici esiyinhloko kanye eyingqayizivele ebusuku Rio sika adonsela phansi yayo towards segcekeni edolobheni. Gávea Low (Lower Gávea), etholakala eduze Praça Santos Dumont (Saint Dumont Square) kuyinto synthesis informal imfashini Rio. Cariocas ukuhamba phakathi imigoqo kanye nabathengisi, kokubukeza abangane elidala nokwenza ezintsha ukuphuza ubhiya kubanda futhi Ungadla kanye okugazingiwe amantongomane noma imikhiqizo khekhe. Akhiwe phakathi ezifundeni Laranjeiras futhi Flamengo lokhu San Salvador Square okuza ephila njalo ebusuku umculo, ukudansa, ukuhleka futhi ingxoxo. It afingqa izintelezi ukuphumula isiko ubusuku bonke bengaphandle e Rio, lapho abaculi ukubutha ukudlala ezihlukahlukene isigqi, ephawuleka kakhulu Samba, Choro, Jazz futhi isiginci acoustic. Le mibuthano bayazazisa izilaleli ojabulisayo futhi ngijabule ngubani ukudansa lapho Ufika yavusa.
Colorful, bejabule futhi basamukela bonke, Rio de Janeiro ebusuku unikeza anhlobonhlobo kanye ezihlukahlukene ngempela ongakhetha zokuzijabulisa, ukuze ivumelane yonke amabhajethi kanye kunambitheka ezigcwele lezimanga, ezifana energy and vibration.
Rio de Janeiro siyikhaya ezifundeni ezingaphezu kuka-160, ngayinye ukuhlinzeka isitayela subculture eyingqayizivele nightlife, kusukela Ipanema upscale kuze Lapa bohemian. I LOVE Rio uthola izindawo nezenzakalo ukuba anikele nokuqondisisa ebanzi zibe ngendlela engcono ukuzwa nightlife komuzi, kusukela classical kuya eyiqiniso ngempela.
Futhi, senza njalo ngifuna ukuthola arcade yesehlakalo ehlukile nezenzakalo.
Amathiphu and Izincomo
A isethulo Rio de Janeiro nge nencazelo zokuhlalisana, zamasiko nezomlando of zonke izici ezenza emzini imigexo emihle futhi eyingqayizivele namuhla.
I LOVE RIO kuyinto tour virtual egudle Rio izingoma eziningi ukuthi, ngenxa yokuntula isikhathi noma ithuba ngeke ngokuqondile olutholwa izivakashi iningi.
Ingosi kuyingxeny I LOVE RIO Imikhiqizo ye-portfolio, ngamunye usebenzisa indlela ehlukile ukukhuthaza isithombe namasiko Rio de Janeiro.
Bhalisela lokuposa yethu ohlwini izinhlinzeko, izindaba nokuningi!
imiklomelo POSTO9.com, LLC. wonke amalungelo agodliwe.